Thursday,02 July, 2020 | १८ असार २०७७
अपडेटः १८ असार २०७७ स्रोत: worldometers.info/ covid19.mohp.gov.np
साम्राज्ञीमाथि डेब्यू चलचित्रमै भेदभाव ! कला / साहित्य . समाचार१४ असार २०७७
प्रज्ञा–प्रतिष्ठानको राष्ट्रिय कविता महोत्सव स्थगन नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानद्वारा ६३ औँ वार्षिकोत्सवका उपलक्ष्यमा असार ९ गते आयोजना गर्न लागिएको राष्ट्रिय कविता महोत्सव–२०७७ स्थगन गरिएको छ । प्रज्ञा–प्रतिष्ठानले एक सूचना प्रकाशित गरी ६३ औँ वार्षिकोत्सव तथा राष्ट्रिय कविता महोत्सव स्थगन गरिएको जनाएको हो कला / साहित्य६ असार २०७७
पहाडमा स्कुले केटाकेटीहरू पैतालाबाट काँडा र, पिँडौलाबाट जुका टिप्दै क्षितिजवारि लामबद्ध हिँडिरहेका केटाकेटीलाई क्षितिजपारि पुग्नु छ ज्ञानको ब्रह्मालय भेट्न कला / साहित्य६ असार २०७७
म कोभिड मनुष्य हौ तापनि दुष्ट, भ्रष्ट निर्दोषले पाउनुहुन्न कष्ट । तसर्थ आफ्नै म रहस्य खोल्छु निकास यो सङ्कटको म बोल्छु कला / साहित्य६ असार २०७७
भोजराज घिमिरेको गजल चल्नेछ फेरि वार्ता, चिर्दै विवाद जाँदा, गुम्ला नि भूमि तोक्नू, वारेसको सिमाना ! चर्किन्छ भूमि आफ्नै, गर्दै गए लडाइँ आक्रोशमा नतोके, आवेशको सिमाना कला / साहित्य६ असार २०७७
केकी भन्छिन्- 'चलचित्र क्षेत्रमा फिल्टर हुने निश्चित छ' आर्थिक रूपमा चलचित्र क्षेत्रले घाटा बेहोर्नुपरेको छ । त्यो दुःखकै कुरा हो । तर, अब चलचित्र क्षेत्रका नराम्रा मान्छेहरू फिल्टर हुने पक्का छ । त्यो राम्रो कुरा हो कला / साहित्य . समाचार५ असार २०७७
चलिचत्रकाे हैसियतलाई लिएर किन जुधे निर्देशक दीपेन्द्र र निश्चल ? उनले लेखेका छन्, 'जुगजुगसम्म बाँचिरहने चलचित्र बन्ने भए पो कलाकारहरू अमर रहिरहने सम्भावना हुन्छ । त्यो हैसियत पनि नेपाली चलचित्रको छैन कला / साहित्य . समाचार५ असार २०७७
'कालुराम' बनाउँदै दिनेश पौडेल निर्देशक दिनेश पौडेलले नयाँ चलचित्रको घोषणा गरेका छन् । दिनेशको निर्देशनमा चलचित्रको नाम 'कालुराम' राखिएको छ कला / साहित्य५ असार २०७७
ऋचाले कतिमा किनिन् 'छक्का पञ्जा ३' र 'छ माया छपक्कै' ? ऋचाले यी दुई चलचित्रलाई १०-१० लाख रुपैयाँ तिरेर एप्स राइट्स किनेकी हुन् । चलचित्रले १० लाखभन्दा बढि कमाए त्यसको सेयर बाँडफाँट गर्ने सहमति भएको छ कला / साहित्य . समाचार५ असार २०७७
गायक खतिवडाको ‘अधुरो प्रेम कहानी’ सार्वजनिक गायक समुन्द्र खतिवडाको नयाँ गीत ‘अधुरो प्रेम कहानी’ सार्वजनिक भएको छ । हाल यूएईमा रहेका गायक खतिवडाले कोरना कहरबीच ‘अधुरो प्रेम कहानी’ सार्वजनिक गरेका हुन् । कला / साहित्य५ असार २०७७
किन आलियालाई अनफलो गर्दै छन् फलोअर्स ? बलिउड अभिनेत्री आलिया भट्टको इन्स्टाग्राममा झण्डै १० लाख फलोअर्स घटेका छन् । ४ करोड ९० लाख हाराहरी फलोअर्स भएको आलियाको इन्स्टामा अहिले ४ करोड ८० लाख फलोअर्स बाँकी रहेका छन् कला / साहित्य . समाचार४ असार २०७७
दीपिका भन्छिन्, 'घरबाट निस्किनै मन लाग्न छोड्यो' उनीहरू बिहान उठेर सँगै योगा गर्थे । अलि-अलि शारीरिक ब्यायामपछि खाना खाने तर्जुमा मिलाउँथे । खाना खाइसकेपछि उनीहरूको 'मुभी टाइम' सुरू हुन्थ्यो । दिनभर चलचित्र हेरेर नै भुलिन्थे उनीहरू कला / साहित्य . समाचार४ असार २०७७
युट्युबमा पनि सक्रिय नायिका कोरोनाको त्रासका कारण देश पूर्ण रुपमा लकडाउनमा छ । चलचित्रजन्य कामहरु रोकिँदा कलाकारहरु फुर्सदिला बनेका छन् । उनीहरु अहिले घरमा नै थुनिएर बसेका छन् कला / साहित्य . समाचार४ असार २०७७
सलमान र करणलाई बहिष्कार गर्ने अभियान सुरु, ३० लाख हस्ताक्षरको लक्ष्य बलिउड अभिनेता सलमान खान, निर्माता तथा निर्देशक करण जोहर, सञ्जयलीला भन्सालीलगायत विरुद्ध उनले मुद्दा हालेका हुन् । जसको साक्षी अभिनेत्री कंगना रानावत बनेकी छन् कला / साहित्य . समाचार४ असार २०७७
सुशान्त मृत्युकाे कारण सलमान र करण ! उल्लेखित बलिउडकर्मीले सुशान्तलाई बलिउडका कार्यक्रमहरू तथा अवार्डहरूमा 'ब्याण्ड' गरेको र त्यसका कारण सुशान्त डिप्रेसनमा पुग्नुपरेको वकिल ओझाले आरोप लगाएका छन् कला / साहित्य . समाचार३ असार २०७७
सुशान्तको आत्महत्याले नेपालमा सुरु गर्‍यो 'नेपोटिजम'को बहस बलिउडमा भएको 'नेपोटिजम' अर्थात् आफन्तलाई मात्र मौका दिने कुराले सुशान्त डिप्रेसनमा पुगेका थिए । राम्रो काम गर्दागर्दै पनि उनलाई बलिउडका केही प्रतिष्ठित निर्माण कम्पनीले ब्याण्ड नै गरेका थिए, जसका कारण उनी डिप्रेसनमा गएको धेरैको आरोप छ कला / साहित्य . समाचार३ असार २०७७
कोरोनाको कहरमा नेपाली चलचित्र अन्य व्यावसायहरू सञ्चालनमा आइसक्दा चलचित्र क्षेत्र भने सञ्चालनमा आएको छैन । अब भने हलवाला तथा वितरकहरू चलचित्र रिलिजको उपाय खोज्न लागिपरेका छन् । हलवालाहरू सुरक्षित रहेर चलचित्र हल सुरु गर्नुपर्ने माग गरिरहेका छन् । वितरक करण श्रेष्ठ पनि अब उच्च सावधानीका साथ चलचित्र रिलिज गर्नुपर्ने बताउँछन् कला / साहित्य . समाचार३ असार २०७७
सरकारलाई चलचित्र संघको ७ दिने अल्टिमेटम यस्तो सङ्कटको समयमा पनि सरकारले चलचित्र क्षेत्रलाई बेवास्ता गरेको भन्दै हलवालाहरू विरोधमा उत्रिएका हुन् । विकास बोर्डको पहलमा सरकारले विभिन्न प्याकेजको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ कला / साहित्य . समाचार३ असार २०७७
९३ वर्षमा नागरिकता पाउँदा
राजु सदाको न्यायका लागि प्रदर्शनमा उत्रिएकामाथि अश्रुग्यास र हवाई फायर
गोदावरी नगरपालिका क्षेत्रका बजार तथा पसल बन्द
लेखा समितिका सभापति खड्काद्वारा गाडीलगायत सेवा सुविधा फिर्ता
एकताको बाटो अवलम्बन गर्न नेकपा पाल्पाको सुझाव
कर्णालीमा कोराना नियन्त्रणमा ८ करोड ९९ लाख बढी खर्च
सुदूरपश्चिममा थप ३ सय ४६ जनामा कोरोना पुष्टि